Lalànan'ny zava-mahadomelina UAE: sazy midoroka zava-mahadomelina sy fandikan-dalàna amin'ny fanondranana an-tsokosoko any UAE
Sazy amin'ny fidorohana zava-mahadomelina sy fanondranana an-tsokosoko any UAE
Lalànan'ny zava-mahadomelina UAE: sazy & sazy noho ny fanondranana rongony
Iray amin'ireo olana lehibe atrehin'ny fiaraha-monina ankehitriny ny fidorohana zava-mahadomelina. Lasa olana maneran-tany izany, ka saika ny firenena rehetra no miatrika ny voka-dratsiny. Nitondra voka-dratsy ho an’ny isam-batan’olona sy ny fiaraha-monina, indrindra ny tanora. Fandrahonana ho an'ny fananganana fianakaviana ihany koa izany, miaraka amin'ny faharavan'ny fianakaviana maro vokatry ny fampiasana zava-mahadomelina.
Indrisy anefa, ny olana amin'ny fampiasana zava-mahadomelina dia hita fa sarotra ny fongotra ho an'ny firenena maro satria mifandray amin'ny heloka bevava voarindra, anisan'izany ny fanondranana zava-mahadomelina sy ny famotsiam-bola. Amin'ny ankapobeny, ny fidorohana zava-mahadomelina dia nanjary valan'aretina mahatsiravina ka manohintohina ny fiarovam-pirenena sy ny filaminan'ny firenena maro. Tahaka ny firenena hafa, ny Emira Arabo Mitambatra dia nanana ny anjarany ara-drariny tamin'ny fidorohana zava-mahadomelina sy ny olana momba ny fanondranana olona an-tsokosoko.
Ny fandrahonana amin'ny fidorohana zava-mahadomelina sy ny fanondranana an-tsokosoko any Emirà Arabo Mitambatra dia nanampy trotraka ny toerana ara-jeografika tsy manam-paharoa ao amin'ny firenena sy ny mahasarika azy ho toeram-pandraharahana sy toeram-pifindra-monina ary toerana fizahan-tany. Amin'ny ankapobeny, amin'ny maha-fonenan'ny olona avy amin'ny firenena samihafa, ny UAE dia tsy afaka misaraka amin'ny olan'ny fidorohana zava-mahadomelina manerantany. Fanampin'izany, nanararaotra ny politika misokatra ataon'ny Emirà Arabo Mitambatra amin'ny varotra iraisam-pirenena ny mpanao heloka bevava mba hanondranana rongony an-tsokosoko manerana ny sisin-taniny. Fantaro hoe iza amin'ireo zava-mahadomelina tsy ara-dalàna any UAE, ny sazy henjana sy ny sazy amin'ny fampiasana sy ny fananana zava-mahadomelina, fanondranana, famokarana ary fizarana.
Lalàna momba ny fidorohana zava-mahadomelina sy fanondranana an-tsokosoko any Emirà Arabo Mitambatra
Ny UAE dia manana politika tsy misy fandeferana amin'ny fidorohana zava-mahadomelina sy ny fanondranana an-tsokosoko. Lalàna Federalin'ny Emira Arabo Mitambatra No. 14 tamin'ny 1995 (Lalàna momba ny zava-mahadomelina sy ny psikôtropika) dia mametraka sazy henjana ho an'izay rehetra voaheloka noho ny fanafarana, fanondranana, fitaterana, fihinanana, fananana, na fitehirizana zava-mahadomelina sy zavatra hafa voarara.
Ny lalàna federaly dia manasokajy ny zava-mahadomelina ho vondrona roa, ao anatin'izany;
Fanafody rongony, anisan'izany ny rongony na marijuana, kôkainina, heroine, methadone, opium, ary nicomorphine
Ny akora psychotropic, anisan'izany ny aminorex, butalbital, ethinamate, ary barbital
Raha ny sazy ho an'ny fidorohana zava-mahadomelina dia ahitana sazy an-tranomaizina manokana sy onitra miankina amin'ny karazana zava-mahadomelina, ny Emirà Arabo Mitambatra dia nanitsy ny lalàna mba hametraka Sampana fitsaboana ny fiankinan-doha. Ny Vondrona dia toy ny ivon-toeram-panarenana izay atolotry ny governemanta hanampiana ireo voampanga ho mpidoroka zava-mahadomelina amin'ny diany amin'ny fahasitranana sy ny fiverenan'ny fiaraha-monina. Na izany aza, ny fanolorana sy ny fidirana ao amin'ny Unit dia an-tsitrapo.
Sazy noho ny fanondranana rongony any Emirà Arabo Mitambatra
Mifanohitra amin'ireo mpandika lalàna amin'ny fidorohana zava-mahadomelina, miatrika sazy henjana kokoa ireo olona voaheloka noho ny fanondranana rongony ao UAE, anisan'izany ny fanafarana sy fanondranana rongony. Ny sasany amin'ireo sazy amin'ny fanondranana an-tsokosoko sy fampiroboroboana zava-mahadomelina tsy ara-dalàna any UAE dia ahitana:
sazy an-tranomaizina eo anelanelan'ny folo ka hatramin'ny dimy ambin'ny folo taona ary onitra tsy latsaky ny Dh20,000 ho an'izay rehetra hita fa meloka amin'ny fitantanana na fametrahana toerana ho an'ny fanararaotana zava-mahadomelina na psychotropic araka ny voafaritra ao amin'ny Fandaharana 1, 2, 4, ary 5 ny lalàna momba ny zava-mahadomelina sy ny psychotropic
an-tranomaizina eo anelanelan'ny fito ka hatramin'ny folo taona ary onitra tsy latsaky ny Dh20,000 ho an'izay rehetra hita fa meloka amin'ny fitantanana na fametrahana toerana ho an'ny fanararaotana zava-mahadomelina na psychotropic araka ny voafaritra ao amin'ny Fandaharana 3, 6, 7, ary 8 amin'ny Lalàna momba ny rongony sy ny psikôtropika
sazy an-tranomaizina eo anelanelan'ny folo ka hatramin'ny dimy ambin'ny folo taona ary onitra tsy latsaky ny Dh50,000 ho an'izay rehetra meloka amin'ny fanondranana na fampisondrotana zava-mahadomelina
fe-potoana an-tranomaizina eo anelanelan'ny fito ka hatramin'ny folo taona ho an'izay meloka amin'ny fampidirana, fanafarana, fanondranana, famokarana, fitrandrahana, na famokarana na inona na inona amin'ireo zava-mahadomelina na psychotropic voatanisa ao amin'ny Fandaharam-potoana 3, 6, 7, ary 8 amin'ny lalàna momba ny rongony sy ny psikôpika.
Raha misy olona hita fa meloka noho ny iray amin'ireo fandikan-dalàna voalaza etsy ambony ireo miaraka amin'ny tanjona fanondranana na fisondrotana, dia migadra mandra-pahafaty sy lamandy eo anelanelan'ny Dh50,000 sy Dh200,000.
Ankoatra ireo sazy ireo, dia mametraka sazy henjana ihany koa ny Emirà Arabo Mitambatra amin'ny hetsika an-tserasera na an-tserasera izay mampiroborobo ny fidorohana zava-mahadomelina na fanondranana olona an-tsokosoko, ao anatin'izany ny fitantanana tranonkala natao hampiroboroboana ny fidorohana zava-mahadomelina na fanondranana an-tsokosoko. Miatrika fanagadrana vonjimaika araka ny voalazan'ny lalànan'ny cyber ao Emirà Arabo Mitambatra ireo meloka, onitra eo anelanelan'ny Dh500,000 sy Dh1 tapitrisa na sazy roa.
Fanampin'izany, ny UAE dia anisan'ny vondron'olona vitsy izay ahitàna fanamelohana ho faty ny fidorohana zava-mahadomelina na ny fanondranana olona an-tsokosoko. Ireo mpitsidika, anisan'izany ny mpizaha tany sy ny mpiasa any ivelany, dia miatrika fandroahana maharitra ankoatra ny sazy henjana amin'ny fidorohana zava-mahadomelina sy ny fanondranana an-tsokosoko. Na izany aza, ny UAE dia mamela ny fananana fanafody voatendry ho an'ny olona mitsidika ny firenena.
Mametraka sazy henjana ny UAE
Olana goavana maneran-tany ny fidorohana zava-mahadomelina sy ny fanondranana an-tsokosoko, miaraka amin'ny firenena maro, anisan'izany ny Emira Arabo Mitambatra, mametraka sazy henjana noho ny fidorohana zava-mahadomelina sy ny fanondranana an-tsokosoko. Miaraka amin'ny fitomboan'ny mponina vahiny ao Emirà Arabo Mitambatra, ny fidorohana zava-mahadomelina sy ny fanondranana an-tsokosoko dia voaporofo ho fanamby lehibe na dia eo aza ny lalàna mifehy ny firenena. Ankoatra ireo sazy henjana mampiady hevitra indraindray, dia nanao dingana hafa ihany koa i Emirà Arabo Mitambatra mba hiadiana amin'ny olan'ny fidorohana zava-mahadomelina, ao anatin'izany ny fametrahana ny sampana fitsaboana amin'ny fiankinan-doha. Na izany aza, mbola misy ny fanatsarana, anisan'izany ny fijerena ny torolàlana momba ny karazana fanafody tokony havela hiditra ao amin'ny firenena.
Mpisolovava manam-pahaizana momba ny zava-mahadomelina any Dubai
Miatrika sazy midoroka zava-mahadomelina sy fandikan-dalàna amin'ny fanondranana an-tsokosoko any UAE ve ianao? Heloka federaly ny manafatra, manondrana, manana, mamokatra, na miatrika zava-mahadomelina tsy ara-dalàna any UAE. Ny UAE dia manana politika tsy misy fandeferana manoloana ny fanondranana rongony. Ny heloka bevava amin'ny fanondranana zava-mahadomelina dia mety hiafara amin'ny fanagadrana, fandoavana lamandy mavesatra ary fandroahana.
Mpisolovava UAE manome torohevitra ara-dalàna, fanampiana ary fanehoana momba ny sazy amin'ny fanararaotana zava-mahadomelina sy ny fanondranana an-tsokosoko any UAE. Ny mpisolovava anay dia manam-pahaizana amin'ny Lalàna momba ny zava-mahadomelina UAE ary manana traikefa be dia be amin'ny fikarakarana raharaha fidorohana zava-mahadomelina sy fanondranana entana. Mifandraisa aminay anio mba hifampidinika!
Antsoy izahay izao mba handraisana fotoana sy hifampidinika amin'ireo mpisolovava manokana momba ny zava-mahadomelina sy heloka bevava amin'ny +971506531334 +971558018669